Ngathi - Hebei Haorui International Trading Co., Ltd.
Malunga ne HAORUI
Ezikhethekileyo, Ukunyaniseka, uMgangatho, iNkonzo, ubuGcisa, U-Hebei Haorui unamathele ngokufanelekileyo kwifilosofi yeshishini iyonke ukusukela oko kwasekwa. Bonke abasebenzi bachitha ixesha elininzi kunye namandla ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, i-HAORUI izimisele ukubonelela ngento enye yokuma ngaphakathi kunye neempahla zangaphandle kunye nokufumana isisombululo kubathengi baphesheya.
Phantse iminyaka engama-20, i-HAORUI igcina intsebenziswano yexesha elide kunye nesuphamakethi ephambili ekhokelayo yaseYurophu.Izinto zokuhlambela, iMidlalo kunye neMveliso zeMpilo, iithoyi zomthi.
AmaSebe oLawulo amathandathu
Icandelo leR & D yobugcisa
Ukugcina ukusebenza okusebenzayo kwicandelo elinxulumene nokucwangcisa ulwazi lwemveliso. Yenza iindaba ezintsha kwimisebenzi eyahlukeneyo kunye noyilo olusekwe kwimfuno yokwenyani yomthengi ngamnye.
Icandelo lezentengiso kunye neNkonzo eliqeqeshwe kakuhle
Ukugxila ekufumanekeni okusila, ukulawulwa kwempahla yomthengisi, ulawulo lwamaxabiso. Sebenzisa yonke inkqubo yoku-odola ngokupheleleyo ukusuka kuphando ukuya kulayisho lwesikhongozeli. Nikeza abathengi ngenkonzo ebanzi necacisiweyo.
Icandelo elilawulayo loMgangatho
Hlola kwaye ukongamele yonke inkqubo yemveliso, uncede isebe lokuthengisa kunye nokuvelisa malunga nolawulo lobugcisa kunye nokuphuculwa. Qinisekisa ukuba iimpahla zizisiwe ngeyona meko intle.
Izatifikethi zilawula isebe
Faka isicelo sezatifikethi ezifunyanwa kwakhona kwiimakethi zangaphandle, cwangcisa uvavanyo nge-SGS, TUV, BV, Hohenstein, Intertek kunye nezinye iilebhu zomntu wesithathu. Nika isibonisi sedatha malunga nezinto ezisetyenziselwa ukuvelisa.
Ukulawula ukuhanjiswa kwempahla, ukujongana nenkqubo yokuhanjiswa kwempahla. Ukubonelela ngeenkonzo zolungiselelo lomntu wesithathu kubathengi baphesheya.
Qokelela ingxelo evela kubenzi, nikezela ngoncedo malunga nokusetyenziswa kwemveliso kunye nokugcinwa kwemiyalelo ngesisombululo kunye nezisombululo.
Ngomdla omkhulu kunye neqela lobuchule, i-HAORUI lukhetho lwakho lokuqala ngokubekwa kweodolo!